Tahiry isam-bolana Desambra 2013 1 Lahatsoratra Aogositra 2012 1 Lahatsoratra Marsa 2012 1 Lahatsoratra Aogositra 2009 1 Lahatsoratra Marsa 2009 1 Lahatsoratra Febroary 2009 1 Lahatsoratra Jolay 2008 1 Lahatsoratra Jona 2008 1 Lahatsoratra Mey 2008 1 Lahatsoratra Avrily 2008 1 Lahatsoratra Novambra 2007 1 Lahatsoratra Oktobra 2007 1 Lahatsoratra Tantara mikasika ny Albania 14 Desambra 2013
Tsia Amin'ny Fitaovam-Piadiana Shimika Syriana Hopotehina Any Albania Mpanoratra Rami Alhames · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana Nandeha ny tatitra fa hopotehina any Albania ny tahiram-pitaovam-piadiana Shimika Syriana. Notsipahan'ny governemanta Albaniana ny tolo-kevitra rehefa nahatezitra ny Albaniana ka nidinan'izy ireo an-dalambe.
Makedonia: Topi-maso Ho An'ny Fankalazàna Iraisam-pirenena Ny Tononkalo Fanao Efa Am-polotaonany Mpanoratra Filip Stojanovski · Estonia Ilay Portiogey mpamokatra sarimihetsika André Soares dia namoaka lahatsary fanadihadiana fohy momba ny Harivan'ny Tononkalo any Struga, hetsika iraisam-pirenena ho an'ny tononkalo izay tanterahana any Makedonia nanomboka tamin'ny 1962.
USA: “Ho roahina hody aho amin'ny Alarobia” Mpanoratra Hoa Quach · Amerika Avaratra Herta Llusho dia mpianatra vao 19 taona mety ho voaroaka hiala an'i Etazonia hody any Albania amin'ny Alarobia 19 Aogositra. Mpitoraka blaogy maro ao amin'ny DreamActivist.org sy blaogy maro hafa ho an'ny zon'ny mpifindra monina no miantso ny Amerikana mba hanampy azy.
Fiombonambe Eropeana-Ukraine: Resaka fifanatonana. Mpanoratra Veronica Khokhlova · Belzika Nambara ampahibemaso tao amin'ny EU-Ukraine Summit tany Paris tamin'ny 9 septambra ny fikasan'ny Fiombonambe Eropeana hanamafy ny Fifanekem-piaraha-miasa miaraka amin'ny Ukraine tamin'ny 2009. Fomba samihafa no nentin'ny haino aman-jery sy ny mpitoraka blaogy maro nandray izany. “Manolotra antoka ho an'i Ukraine ny Fiombonambe Eropeana,” hoy ny lohatenin'ny BBC. “Tsy mampanantena...
Ny Balkana: “An’iza ity hira ity?” Mpanoratra Elena Ignatova · Bolgaria Namoaka ny tahirin-kevitra “An’iza ity hira ity” ny mpitoraka bolongana maro Masedonina tamin’ny alalan’ny Bulgariana iray Talen’ny Adela Peeva izay ao amin’ny blaogin’izy ireo ihany ary nanomboka niresaka ity tantara ry zareo. Nalaina horonantsary io tahirim-pahalalana io ho fitarihan-kevitra ka ity talen’ny Adela Peeva ity no nahita izany nandritra ny... 04 Jolay 2008
Faritra Balkanika : Mpizahatany, tapany faha-2 Mpanoratra Veronica Khokhlova · Kosovo Sary marobe, lahatsoratra ary hafatra maro mikasika ny tohin'ny dian'i Michael J. Totten's any Albanìa, sy Montenegrô ary Kôsôvô. [Ity dia mbola tohin’ilay lahatsoratra efa notaterina teto ihany : Michael J. Totten mpizahatany]
Faritra Balkanika : Michael J. Totten mpizahatany Mpanoratra Veronica Khokhlova · Bosnia Herzegovina Michael J. Totten ao amin'ny gazety Middle East Journal no manapariaka lahatsoratra ravahina sary mikasika ny diany farany tany amin'ny faritra Balkanika (93 ireo hafatra voarainy); LimbicNutrition Weblog kosa dia nanoratra ao amin'ny blaoginy ny valin-taratasy atolony an'i Totten.
Albania : Trano miravaka loko marevaka Mpanoratra Veronica Khokhlova · Tsidika Traveler [mpizahatany] no manapariaka ao amin'ny blaogy Stepping Stones [mitsambikina ambony harambato] andiantsary trano miravaka loko marevaka nalaina tany Tirana, any Albania : Can you imagine what it is like to live in a city with buildings this fantastic???? It's been a grey, overcast day and I thought it was...
Eoropa atsimo atsinanana, Rosia: Ady, Fandriampahalemana ary tantara ifampizarana Mpanoratra Veronica Khokhlova · Bolgaria Vladikavkaz renivohitry Ossetia Avaratra any Rosia, nametraka a baoritra kisarintsoratra amin'ny teny Rosiana izay ho sarotra tanterahina any Kaokazy avaratra ny mpampiasa ny LJ alan-tskhurbaev: Kosovo is Serbia! Kosovo an'i Serbia! Raha mitaha amin'i Ossetia atsimo faritra miendaka amin'i Georgia, izay iheveran'ny mpitarika ao fa fanombohan-javatra iny fahaleovantenan'i Kosovo...